Nentwana unekhono ucwangciso lwendlela kunye nomongo schedule, ungakwazi kakhulu ngokulula ndadibanisa i hambo oluya kwenza i uhambo kanye njengokuba Nakuba le indawo ekuyiwa kuyo.
Lake Garda yenye Lakes ezinkulu Northern Italy kwaye sikhulu kweli chibi glacial amachibi Italy amahlanu, bondliwa yi Alps kule ngasentla. North of Verona, Lake Garda lusapho kakhulu – kunye namanzi wezemidlalo-ogxile of Italy amachibi. Ikwalilo chibi likhulu e-Itali, efikelela kwi eentaba esiluhlaza eweni ukuya kwikona yomntla Po Valley.
kuziindaba ngcono. indawo Lake Garda kaThixo ulunika unyaka-ngeenxa zonke sezulu apho yeminquma kunye lemons zikhule kakuhle emantla kuluhlu yazo yesiqhelo. Perfect kwezinye kwemini G&T! Faka sandy elide esimhlophe kwaye bamba kwiidolophu kunye inala malanga iimbono. Namkela ngokwakho ogqibeleleyo iholide indawo ekuyiwa kuyo!